Madaxtooyada oo shaacisay maalinta uu furmayo shirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxtooyada oo shaacisay maalinta uu furmayo shirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
Madaxtooyada oo shaacisay maalinta uu furmayo shirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
Madaxtooyada Villa Somalia ayaa si rasmi ah u shaacisay waqtiga uu furmayo shirka Dowladda Dhexe iyo madaxda Maamul Goboleedyada ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Agaasimaha Warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in shirka Maamulada dalka iyo Dowladda Dhexe uu Maalinta Khamiista ah ee taariikhda tahay 10 Bisha September ka furmi doono Madaxtooyada.
Agaasime Cabdinuur ayaa sheegay in shirkaas lagu dhameystiri doono hanaanka doorashooyinka dalka.
Sidoo kale Agaasimaha ayaa sheegay in qodobadii kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb3 ay asal u noqon doonaan shirka dhawaan u furmayo Dowladda Dhexe iyo madaxda Maamul Goboleedyada.
Dhawaan ayey aheyd markii madaxweynayaasha Jubbaland, Puntland iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay isku fahmeyn in shir kale loo qabto dhammaan maamul Goboleedyada si loo gaaro go’aan loo dhan yahay oo ku saabsan qaabka ay noqoneyso doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo.
Hadalka kasoo baxay madaxtooyada ayaa kusoo beegmayo xilli madaxweynayaasha maamuladda Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug ay shir ku yeelanayaan maanta Magaaladda Baydhabo halkaas oo ay kaga tashan doonaan mowqifkood ee shirka Muqdisho ka furmayo.
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka kasoo baxay Agaasime Cabdinuur.